Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : November 2007
ရှေးလူကြီးသူမများတဆင့်စကားနှင့်တဆင့်ပြောကြားလာမူကြောင့်ယခုတိုင်မပျောက်ပျက်သေး သောပုံပြင်များကိုဆက်လက်တည်တန့်သွားစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ဤလသည်တန်ဆောင်တိုင် ဖြစ်သောကြောင့်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင်ကောင်းကင်ရှိကြယ်နက္ခတ်တို့၏စုံလင်စွာထွန်း လင်းကြသည်ဟုဆိုပါသည်။ထို့ကြောင့်ထိုလပြည့်နေ့တွင်ဆေးပေါင်းခသည့်နေ့ဟုပြောကြသည်။
တန်ဆောင်းမုန်းလပြည့်နေ့တွင်ကောင်းကင်ရှိကြယ်တာရာများနက္ခတ်များစုံလင်စွာထွန်လင်း သည့်အတွက်ထိုလတွင်မြန်မာတို့ရင်ထဲစွဲနေသောပုံပြင်များထဲမှကြတ္တိကြယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေး ဖြစ်ပါသည်။ဤရှင်းလင်းချက်ကိုနက္ခတ်တဗေဒပညာရှင်များကတော့သိပ္ပံနည်းမဆန်သောကြောင့် လက်ခံကြမည်မဟုတ်ပါ။ကြိတ္တိကာကြယ်ကိုဖျောက်ဆိတ်ကြယ်ဟုလည်းခေါ်ပါသည်။
လေးစားစွာဖြင့် - ငွေစင်ရော်
သူတို့၏ဆန်စက်တွင်သူရင်းဌားမောင်ကဆုန်နှင့်မောင်နယုန်ညီအကိုတို့ရှိကြသည်။သူတို့သည် သူဌေးသမီးများကိုတဖက်သက်ချစ်နေကြသည်။သို့သော်သူဌေးသမီးတို့ကမောက်မာစွာဆက်ဆံ ပြောဆိုသောကြောင့်အရှက်ရခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့်ညီအကိုနှစ်ယောက်သည်ထိုဆန်စက်မှစွန့်ခွာ ပြီးကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ဖြင့်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြရန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
အမျိူးသမီးများလည်းဖြစ်၊ဆက်ဆံရေးလည်းကြမ်းတမ်းမူကြောင့်ညီအမခုနှစ်ဖော်တို့၏စက်ရုံမှာ အရှူံးပေါ်ကာဒုက္ခရောက်ကြသည်။ပထမတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချ၍၄င်း၊ နောက်ပိုင်းတတိတိဖြင့်စက်ရုံနှင့်မြေကိုပါရောင်းစားရသည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်။
ညီအမခုနှစ်ဖော်သည်အလွန်မာနကြီးပြီးအပြောအဆိုမောက်မာသဖြင့်ထိုအရပ်တွင်နေထိုင်၍မဖြစ် နိုင်ချေ။ထို့ကြောင့်တခြားအရပ်ဒေသသို့ပြောင်းရွှေ့၍နေကြသည်။မြို့သူမြို့သားများကလည်းသူ တို့ညီအမကိုမသနားကြချေ။
ဆန်စက်ပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ထိုနားသို့ရောက်လာသည်။ညီအမခုနှစ်ဖော်မှာဆန်စက်ပိုင်ရှင်၂ယောက် ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရာအလွန်အံ့သြသွားကြသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆ်ိုသော်ထိုဆန်စက်ပိုင်ရှင်မှာ သူတို့မချေမငံဆက်ဆံလိုက်သောသူရင်းငှားမောင်ကဆုန်နှင့်မောင်နယုန်ညီအကိုဖြစ်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။မောင်ကဆုန်နှင့်မောင်နယုန်တို့မှာသူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မူများကြောင့်ယခု လိုဆန်စက်ပိုင်ရှင်များအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လွန်လည်းရှက်မိကြသည်။ထို့ကြောင့်ကောက်ရိုးပုံထဲဝင်ပုန်းလိုက်ကြသည်။မောင်ကဆုန်နှင့်မောင် နယုန်မှာလည်းလယ်ကွင်းများကိုလိုက်လံကြည့်ရင်းစပါးချွေပြီးသားကောက်ရိုးကိုမီးရှိူ့ပစ်ရန်သူ့ တပည့်များကိုညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။ညီအမခုနှစ်ဖော်မှာသူတို့၏အသက်ထက်ကောက်ရိုးပုံထဲ မှထွက်လိုက်ပါကမောင်ကဆုန်နှင့်မောင်နယုန်တို့ကမှတ်မိသွားပြီးအရှက်ရမည်ကိုစိုးရိမ်ကာငြိမ် ငြိမ်လေးနေနေကြသည်။
မောင်ကဆုန်နှင့်မောင်နယုန်တို့၏တပည့်များသည်သူတို့၏သူဌေးညွှန်ပြသောကောက်ရိုးပုံကို ချက်ချင်းပင်မီးရှိူ့လိုက်ကြသည်။သူဌေးသမီးခုနှစ်ယောက်မှာရှက်လွန်းသဖြင့်ကောက်ရိုးပုံထဲမှ မထွက်ပဲအသေခံသွားကြသည်။သူတို့ညီအမခုနှစ်ဖော်သည်သေဆုံးပြီးနောက်ကောင်းကင်တွင် ကြတ္တိကာကြယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားကြသည်။ကြတ္တိကာကြယ်ကိုသေသေချာချာလေ့လာ ကြည့်ပါကကြယ်ခုနှစ်လုံးစုလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ထိုကြယ်ခုနှစ်လုံးသည်ညီအမ ခုနှစ်ဖော်ကိုကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကြတ္တိကာကြယ်သည်ကဆုန်လနှင့်နယုန်လတွင်မိုးကောင်းကင်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရှာ၍မတွေ့ရပါ။အကြောင်းမှာမောင်ကဆုန်နှင့်မောင်နယုန်ကသူတို့ကိုတွေ့မည်ကိုစိုး၍ထိုနှစ်လ တွင်ပုန်းအောင်းနေကြသည်ဟုလူကြီးသူမများကပြောဆိုကြပါသည်။
Posted by Junior Win at 5:55 AM No comments:
ကျွနိုပ်တခါတရံလူတွေပြောနေကြတာကြားဖူးသည်။”ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်ရွှေ” တဲ့။သို့သော်ကျွနိုပ်ထိုစကားလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုနားမလည်ပါ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းကရွှေဖြစ်မှာလဲ။ကျွနိုပ်ကိုယ်ကျွနိုပ်မေးနေမိပါသည်။ဆိတ်ဆိတ် နေ ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပဲအလွန့်အလွန်ကိုတန်ဖိုးရှိသည်ဖြစ်ပါသလား။
ဒါဆိုရင်စကား ပြောတာကြတော့ရော။”စကားပြောခြင်းသည်ငွေ”တဲ့။ သူတို့ကပြောပါသည်။ ဒီတော့ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းကစကားပြောတာထက်ကိုပိုပြီး
သောလူတ ချို့ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကတမနက်လုံးတိတ်တဆိတ်ပင် နေနေကြသည်။ပြီးတော့တစ်နေ့လုံးစကားမပြောကြပါ။တစ်ချိန်လုံးဆိတ်ဆိတ် နေနေကြပါသည်။သူတို့စကားနည်းနည်းလေးလောက်သာပြောကြတာကတော့
အမှန်ပါ။ သို့ပေမယ့်တကယ့်ကိုမပြောမဖြစ်သောစကားလေးတွေသာဖြစ်ပါသည်။ ဒါနှင့်ပဲကျွန်တော်သူတို့လုပ်သည့်အတိုင်းတသွေမတိန်းလိုက်လုပ်ကြည့်သောအခါ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်အဲဒါက်ိုသဘောကျသွားမိပါသည်။
ကျွနိုပ်တို့သည်ကျွနိုပ်တို့၏ကမ္ပဠာန်းပြဆရာတော်ဆုံးမစကားအတိုင်းသေသေချာ ချာကျင့်ကြံကြည့်ပါသည်။ကျွနိုပ်တို့၏ထိုင်သည့်အခါ၊ထသည့်အခါ၊လှူပ်ရှားသွား လာသည့်အခါ၊လဲလျောင်းသည့်အခါ၊အနားယူသည့်အခါအစရှိသည်တို့၏ အသေးစိတ်များအပေါ်တင်းကျပ်စွာသတိပြုနေရမည် ဟုဆိုပါသည်။အကယ်၍အဲဒီ လိုမလုပ်ဖူးဆိုလျှင်တော့ကျွနိုပ်တို့၏အသက်ရှူသည့် ၀င်သက်ထွက်သက်
အပေါ်သတိပြုနေရမည်။ ယင်းသည်အမှန်တရားကိုရှာဖွေရာ-ကျွနိုပ်တို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်နှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရား ဖြစ်လာပုံ၊ပျက်သွားပုံတို့ကို ရှာဖွေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်ဒီလိုဆိုတော့ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမကို
Posted by Junior Win at 12:08 AM No comments:
ဒီအပတ် Special Issue ဂဏ္ဏမှာတော့တန်ဆောင်တိုင်လမြတ်နှင့်လျောညီစွာ အမှတ်တရများစွာကိုစုဆာင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ပန်းချီဆရာကြီးပေါ်ဦးသက်၏၁၉၆၉ခုနှစ်လက်ရာပန်းချီကားတစ်ချပ်၊ မျိူးမြန်မာ့တိုင်းကဗျာတစ်ပုဒ်၊သီတဂူဆရာတော်အရှင်ဥာဏိသရ၏မေတ္တာပို့ဆုတောင်း များနှင့်ပန်းချီဆရာကြီးဦးဘကြည်၏တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့အမှတ်တရ
အိုးေ၀၈ျာနယ် ၁၄-၁၀-၆၉ သတင်းကျွတ်လ္ဆန်း ၄ ရက် အမှတ် ၂၉
ပန်းချီဆရာ ပေါ်ဦးသက် ရဲ့ပန်းချီကားနှင့်အတူဟောဒီကဗျာကိုအိုးဝေမျက်နှာဖုံးမှာ
သို့သော် ကဗျာစပ်သူရဲ့အမည်ကိုဖော်မပြထားတဲ့အတွက် ဒီကဗျာကို
အကယ်၍များဟောဒီ စာဖတ်ပရိသတ်ကတိတ်ိကျကျလေးအဖြေရှာပေးမည် ဆိုပါလျှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံ၍ပြင်ဆင်ဖော်ပြပေးပါ့မည်ဟုငွေစင်ရော်မှ
ဘဂ ၀ါ ပရမေ
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျာ ဘေးရန်ကွာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။
မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်စီသုံး ရွှင်ပြုံး ကြပါစေ။
မေတ္တာ ရန်သူဒေါသမူ အပူကင်းပါစေ။
မေတ္တာရေစမ်း ကိုယ်စီဖြန်း အေးချမ်း ကြပါစေ။
ခန္ဓီ ၏ရန် ဒေါသမာန် တွန်းလှန် နိုင်ပါစေ။
ခန္ဓီ နှလုံး အစဉ်သုံး ရွှင်ပြုံး ကြပါစေ။
ဒို့မေတ္တာစွမ်း ကမ္ဘာလွှမ်း ငြိ်မ်းချမ်း ကြပါစေ။
သုံးဆယ့်တစ်ပုံအရပ်ဆယ်မျက်နှာအန္တစကြာင်္ဝဠာမှာရှိကျကုန်သောအန္တသတ္တ၀ါ တွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းညိမ်းကျပါစေ။ ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းညိမ်းကျပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကျပါစေ။
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကျပါစေ လို့မေတ္တာဓါတ် တွေဖြန့်ဝေလိုက်
ထွန်းငြှိဝင်းပြောင် ဆီမီးရောင် တန်ဆောင်ဆိုသည့်ပွဲ။
An outburst of energy in meritorious deeds under cloudless skies and myriad lights.
ဘဒ္ဒ န္တ ပညာဏိက(ဆားတောင်ဆရာတော်)
သက်တော် (၈၃) နှစ်၊သိက္ခာတော် (၆၄) ၀ါ သည်
၁၃၆၉ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၄ ရက်
အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနှစ်တွင်
ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ သွားခဲ့ပါသည်။
သက်တော် ၇၆ နှစ်အရွယ် ဆရာတော်ကြီး၏ပြုံးရွင်နေသောမျက်နှာတော်ကိုဖူးတွေ့ရပုံ။
(၁၇-၄-၂၀၀၇ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသူ NNS)
ဆရာတော်ကြီးအားအဖဦးငွေဒင်၊မိခင်ဒေါ်ပြောင်းမယ်တို့မှ၁၂၈၇ခုနှစ်တန်ဆောင်းမုန်းလဆန်း ၁၄ရက်(၂၉-၁၀-၁၉၂၅)ကြာသာပတေးနေ့နေ့လယ်၂နာရီအချိန်တွင်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ သားသမီးခုနှစ်ယောက်အနက် စတုတ္ထမြောက်သားရတနာဖြစ်သည်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ၁၃၆၉ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၄ ရက် (၁၃-၁၁-၂၀၀၇)
အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနှစ်တွင် သီတင်းသုံးတော်မူရာမင်းရွာကုန်း ဆားတောင်ပဠိပတ္ထကျောင်းတိုက်၌ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်။
၁၃၆၉ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ ရက်(၂၅-၁၁-၂၀၀၇) တနင်္ဂနွေနေ့တွင်
နိဗ္ဗာန်စံကျောင်းချတော်မူပြီး ၁၃၆၉ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၄ ရက်(၁၀-၂-၂၀၀၈) တနင်္ဂနွေနေ့
တွင် အန္တိမဈာပနသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသာသနာရေးဦးစီးဌာနမှသတင်းကို
ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမ - မိန့်စကား
နိဗ္ဗာန် မင်္ဂဖိုရလိုကြောင်းနဲ့ ဆုတောင်းခဲ့တာများပြီ။
၀ိပဿနာတရား အားထုတ်ရတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်၊
Posted by Junior Win at 5:28 AM No comments:
၁၃၆၉ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၄ ရက် (၁၃-၁၁-၂၀၀၇)
ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ ကြောင်းကြားသိရပါသဖြင့်
ဆရာတော်ကြီး၏ ဆုံးမသြ၀ါဒများစွာထဲမှ တစ်ခုကို ဖော်ပြရင်း
ဆရာတော်ကြီးအား ရိုသေစွာ ကန်တော့လိုက်ရပါသည်။
ဆားတောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ၏
အမြဲဆင်ခြင်နေရမဲ့ တရားက အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ
လုပ်တိုင်းမဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်တိုင်းသာဖြစ်နေပါက ဘယ်မှာအနတ္တရှိမည်နည်း။
ပြောတိုင်းမရ ဒေါမထနှင့် ကိုယ်ပြောတိုင်းသာ ရနေပါက ဘယ်မှာအနတ္တရှိမည်နည်း။
ကြံတိုင်မမြောက် စိတ်မဖောက်နှင့် ကိုယ်ကြံတိုင်းသာ ပြီးမြောက်ပါက ဘယ်မှာ အနတ္တရှိမည်နည်း။
ဆင်းရဲကြုံမူ မညီးညူနှင့် ချမ်းသာချည်းသာကြုံနေပါက ဘယ်မှာ ဒုက္ခ ရှိမည်နည်း။
ပျက်စီးတိုင်းလျှင် မပူပင်နှင့် မပျက်စီးကာ ခိုင်မြဲပါက ဘယ်မှာအနိစ္စ ရှိမည်နည်း။
အာရုံဟူသမျှ မတောင့်တနှင့် အာရုံတိုင်းသာ တောင့်တပါက ဘယ်မှာ လောဘဆုံးမည်နည်း။
အရာရာမျိူး စိတ်မဆိုးနှင့် အရာရာတိုင်းသာ စိတ်ဆိုးပါက ဘယ်မှာ ဒေါသဆုံးမည်နည်း။
သိဥာဏ်မလိုက် သင်မမိုက်နှင့် သိဥာဏ်မရ မိုက်နေပါက ဘယ်မှာ မောဟဆုံးမည်နည်း။
ဗုဒ္ဓတရားမေ့မထားနှင့် ဆုံးမတိုင်းသာကျင့်ကြံပါက ဘယ်မှာနိဗ္ဗါန်ဝေးမည်နည်း။
Posted by Junior Win at 12:01 AM No comments:
"Pagodas and What They Mean To Buddhists"
ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ် နှင့်မဆိုင်ပါ။သို့သော်ကလေးအဖို့စိတ်ကူးယဉ်စရာဇတ်လမ်းသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးမှစစ်ကိုင်း ဘက်သို့မော်တော်လေးဖြင့်ကူးနေစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်ကလှပသောအင်းဝတံတား ကြီးမဆောက်ရ သေးပါ။တောများထူထပ်ပြီးတောက်ပသော ဘုရားစေတီများရှိရာဆီသို့ဦးတည်၍သွားနေကြပါသည်။ဘု ရားစေတီ၏ထီးတော်များဆီမှ ခေါင်းလောင်းသံလေးများသည်ဧည့်သည်များကိုကြိုဆိုကြပါသည်။
အဘိုးကပြောလိုက်သည်။”ဒီဘု ရားနှစ်ဆူကိုရှေးမြန်မာမင်းတွေလက်ထက်က အစောင့်အကြပ်တွေချထားခဲ့တယ်။”
တစ်ချိန်ကမင်းသားတစ်ပါးသည်သူ့အစ်ကိုဘုရင်ကသူ့ကိုကောင်းစွာမဆက်ဆံဟု ခံစားရပြီးတော်လှန်ရန် ကြံစည်ခဲ့သည်။သူစစ်ချီလာစဉ်ထိုဘုရားနှစ်ဆူသို့ရောက်သော် ထိုနေရာရှိဘုရားဆင်းတုတော်အား သင်္ကန်းကပ်လေသည်။ထိုအခါဘုရားဆင်းတုတော်သည် လက်ကို ဆန့်တန်း၍သင်္ကန်းကိုလက်ခံတော်မူ ခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းတွင်မင်းသားသည်စစ်နိုင်၍ ဘုရင်ဖြစ်သွားလေသည်။သူဘုရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလုပ်ဆောင် သောပထမဦးဆုံးသောလုပ်ရပ်မှာ ထိုဘုရားနှစ်ဆူ၏ဘေးတွင်အစောင့်များတင်းကျပ်စွာချထားစေခြင်းဖြစ် လေသည်။
တစ်ချိန်ကယင်းစေတီနှစ်ဆူသည်စစ်နှင့်ပတ်သက်ခဲ့သလိုတစ်ချိန်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိအောင်လုပ် ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။မွန်ဘုရင်ရာဇာဓိရာဇ်သည်စစ်ချီလာပြီး ထိုစေတီများ၏ပရ၀ဏ်အရောက်တွင်ငြိမ်း ချမ်းစွာဖြင့်ပြန်လှည့်သွားလေသည်။ ရာဇာဓိရာဇ်သည်အင်းဝနေပြည်တော်သို့ရောက်ရန်မိနှစ်အနည်း ငယ်သာလိုတော့သည်။၀င်တိုက်ဖို့အချိန်ကိုသာစောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ စေတီ၏ပရ၀ဏ်မှသူစစ်တိုက် တော့မည့်လှပသောနယ်မြေ၏ရူခင်းကိုလှမ်းကြည့်
လိုက်သည်။ သဲသောင်များထွန်းနေသောမြစ်ကမ်း ဘေးတွင်တောင်တန်းများ၊တောင်ထိတ်များပေါ်တွင်လရောင်အောက်၌တောက်ပနေ သောစေတီများကို ရူစားမိသည်။စေတီများ၏ခေါင်းလောင်းသံများမှာလည်းသာယာ
လှသည်။ ဤသာယာသောခေါင်းလောင်း သံများနေရာတွင်စစ်ချီသံများအစားထိုးဝင်ရောက်တော့မည်၊ ငွေရောင်သဲသောင်ပြင်များပေါ်တွင်နိုင်ငံသား ကောင်းများ၏သွေးများကျရတော့မည်၊ဒါတွေဟာကြေကွဲစရာပါလား။ ဤသို့စဉ်းစားမိပြီးမြန်မာဘုရင်ထံမှ ကိုယ်စားလှယ်များလာသောအခါငြိမ်းချမ်းရေးစာချူပ်ချူပ်၍ပြန်သွားသည်။ သူမထွက်ခွာမီထိုစေတီနှစ်ဆူ တည်ရှိသောတောင်ကုန်းပေါ်တွင်ဇရပ်တစ်ခုကို
ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ၄င်းသည်ဘုရားဖူးများအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏မေတ္တာစိတ်ကိုဖော်နည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။”
စာထဲမှာရည်ညွှန်းထားသူ ကျွန်မ ဆိုတာ ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်ဖြစ်၍ စာအုပ်အဖုံးတွင်အဘိုးဖြစ်သူကိုလက်ဆွဲ နေသောမြေးမကလေးဖြစ်ပါသည်။ အနောက်မှာရပ်နေသူကတော့ ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်၏ အဘိုး မြန်မာပညာရှိ် ဦးဖေ ဖြစ်ပါသည်။
ဟောသည် link လေးကတော့ ဒေါ်ခင်မျိူးချစ်၏စာအုပ်သတင်းဖြစ်ပါသည်။
စာအုပ်ချစ်သူများအတွက် စာအုပ်သတင်း အစုံအလင်ကိုဖတ်ရူရန်-
Posted by Junior Win at 5:16 AM No comments:
So be it I shall grow or let me die.
ကောင်းကင်ယံမှာ ရောင်စုံသက်တန့်ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ
ကျွနိုပ်၏ရင်မှာ ပီတိဖြင့် ခုန်သွားတယ်-
ကျွနိုပ် အခု လူကြီးဖြစ်တော့လည်း အဲဒီလိုပဲ....
သို့မဟုတ်ရင်. . .
အားလပ်ချိန်များတွင်မဟုတ်တာမလုပ်ပဲအပျင်းပြေစရာများရှိနေရုံဖြင့်ယဉ်ကျေးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မလာနိုင် သေးပါ။
ယဉ်ကျေးမူဟူသည်တန်ဖိုးထားမူဖြစ်၏။သို့သော်ထိုတန်ဖိုးထားမူသည်လူ့ကျင့်ဝတ်အသိဥာဏ် နှင့်တွေးခေါ်မူတ်ို့အထိအကျိူးသက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်း သည်လူ့ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံးသည်ဘာဖြစ်သည်ကိုသိရမည်။သိရုံသာမကရရှိအောင်လည်း လုပ်နိုင်ရမည်။အထူးသဖြင့်အနုပညာနယ်၊စာပေနယ်၊သိပ္ပံနယ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးကို
သမိုင်းတွင်အနုပညာ၊စာပေ၊သိပ္ပံနယ်ပယ်တို့တွင်အကောင်းဆုံးကိုဖန်တီးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များစွာ ထွန်းကားခဲ့သည်။ဥပမာအနည်းငယ်ကိုပြောရသော်ဟိုးမား၊ပလေတို၊ဒင်တေ၊ရှိတ်စပီးယား၊မိုက် ကယ်အိန်ဂျယ်လို၊လီယိုနာဒိုဒဗင်ချီ၊နယူတန်၊ဘီသိုဘန်၊မဒန်ကြူရီ စသည်တို့ရှိကြသည်။
ဂုဏ်ယူရမည်။ ဤသည်ကား ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်း၏၀ိသေသတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူတိုင်းအနေဖြင့်လက်လှမ်းမီပြီးအကောင်းဆုံးစံချိန်ကိုရနိုင်သောနယ်ပယ်တစ်ခုရှိသည်။ ၄င်းမှာကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်သည်။ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အလွန် တော်သောလူဖြစ်ရန်မလိုပါ။ဤနယ်ပယ်သည်အားလုံးလက်လှမ်းမီသောအရာဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားတို့၏သင်ခန်းစာလည်းဖြစ်သည်။
ယဉ်ကျေးမူသည်မှန်ကန်သောတန်ဖိုးထားမူနှင့်ထိုတန်ဖိုးထားမူကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဟုဆိုလျှင်နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရုံလူများသည်ကောင်းကောင်းနေ၊ကောင်းကောင်းစားနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်မူများရှိနေရုံဖြင့်ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မလာသေးပါ။ကျွနိုပ်တို့သည် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ပတ်သက်၍ပထမတန်းစားဖြစ်ခြင်းကိုဦးတည်ရမည်။
ဤကဲ့သို့သောလူ့အဖွဲ့အစည်းမျိူးသည်သမိုင်းတွင်မရှိခဲ့ပါ။ရှိဖို့လည်းတော်တော်ခဲယဉ်းပါသည်။ သို့သော်ပထမတန်းစားဖြင့်အနီးကပ်ဆုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသမိုင်းတွင်ရှိဖူးပါသည်။၄င်းသည် အေသင်(Athens)သို့မဟုတ်ရှေးဂရိ(Greek)တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် အကြောင်းနှင့်အကျိူးကိုဆက်စပ်တွေးခေါ်တတ်သောလူတိုင်းအဖို့ရှေးဂရိယဉ်ကျေးမူသမိုင်းနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လေ့လာသင့်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Posted by Junior Win at 5:33 AM No comments: